Niutech @ 2018 Munich IFAT - Shiinaha NIutech Deegaanka
Fair 20aad Caalamiga ah ee Ilaalinta Deegaanka (IFAT) ee Munich, ayaa waxaa grandly qabtay Expo Center New International ee Munich ka 14-kii May in ay 18-kii May, 2018 Expo Munich ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1966, cadaalad ganacsiga ee caalamka ugu xirfadeed ee ilaalinta deegaanka . Sida mid ka mid ah bandhigyo caalami ah oo waaweyn shahaado by UFI, waxay u horseeddaa arrimuhu ugu dambeeyay ee suuqa caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka iyo la aqoonsan yahay sida tilmaame caalami ah.
IFAT ayaa si guul leh loogu qabtay 19 kalfadhi oo waa caddaalad ugu weyn oo ugu muhiimsan ee ganacsiga warshadaha ee ilaalinta deegaanka. The bandhig shan maalmood daboolayaa meel ka mid ah 260,000 oo mitir oo laba jibbaaran. Waxay leedahay 18 baaxad weyn oo hoolalka bandhig iyo saddex goobaha bandhiga dibada. Waxa uu isu keenay 3.304 bandhige ka 59 dal oo soo jiitay in ka badan 135,000 oo soo booqda xirfadeed caalamka ka 168 dal si ay u booqdaan, wuxuuna ka xaajoodaa.
IFAT Expo ayaa had iyo jeer lagu arkaa fursad muhiim ah warshadaha ee ilaalinta deegaanka qoyska inay soo galaan suuqa caalamiga ah. shirkado badan oo si fiican u yaqaan gudaha iyo dibadda deegaanka ilaalinta leeyihiin in EXPO this ka qeyb qaataan oo soo bandhigay teknoolajiyada ilaalinta deegaanka hoggaamineed ay dunida. Niutech Deegaanka Technology Corporation (halkan loogu yeeri sida "Nituech") keentaa qalabka technology pyrolysis keentay caalamka in ay IFAT. Waa ma aha oo kaliya ayaa rajeynaya in ay ballaariso ganacsiga caalamiga ah iyada oo loo marayo this madal ganacsi baaxad weyn, laakiin sidoo kale soo bandhigi dunida si aad u aragto kaca ee warshadaha ilaalinta deegaanka Shiinaha ee, intaa waxaa dheer, si uu u qabto fursaddan si ay u qabtaan wada hadal iyo is-weydaarsiga la taambuug aqoonyahanada ka soo adduunka oo dhan, iyo si ay u muujiyaan dunida ee style iyo xoog shirkadaha maamulka deegaanka Shiinaha ee hab loo wada dhan-wareega, heer multi-, oo kala duwan.
Shiinaha iyo shahaado by EU CE iyo Germany TUV. The technology iyo qalabka lagu saleyn karaa tiro balaadhan oo ah codsiyada iyo waxaa loo isticmaali karaa si ay dib u warshadaynta ee polymers sare-kelli sida Taayirada qashinka, bacyaal qashinka, daaalo saliid, noocyo kala duwan oo saliid qashinka, saliid haraaga ah, qashinka kiimikada, qashinka adkaha ah , iyo dabdhaliyayaasha. qalabka Tani ayaa dhoofiyo Germany, Brazil, Hungary, Estonia, India, Thailand, Malaysia, Ciraaq, Taiwan iyo dalalka kale iyo gobolada, ayaa ka macaamiisha ku guuleystay ammaantaada loo dhan yahay.
Iyada oo sara ah ee baahida maamulka deegaanka Shiinaha ee, baahida loo qabo is dhaafsi technology deegaanka u dhaxeeya gudaha iyo dibadda ay sii kordhayso. Sida muhimka ah ee Europe, Germany waa mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ugu weyn caalamka ee gaar ahaan boosteejo loogu doorbido shirkadaha Shiinaha si toos ah u muujiyaan wax soo saarka iyo teknoolajiyada dunida. Sida shirkad Chinese, Niutech ma aha oo kaliya ka dhigan tahay xoog brand iyo farsamo heer shirkadda, laakiin sidoo kale waxa ay ka tarjumaysaa xoogga warshadaha Shiinaha ee ilaalinta deegaanka. Niutech sidoo kale sooci doontaa ay furitaankii suuqa caalamiga ah iyo in la dhiso mid saarayaasha qalabka ilaalinta deegaanka caalamiga ah sare iyo bixiyeyaasha adeegga technology daaweynta deegaanka.
waqti Post: Jul-11-2018